Maysuun “Makka aadimayo, si aan u arko daba-dhifle Israa’iil u shaqeeya…” - Latest News Updates
Maysuun “Makka aadimayo, si aan u arko daba-dhifle Israa’iil u shaqeeya…”
W/Q: Maysuun Al-Suweydaani (gabadh uu dhalay daaciga reer Kuweit Dhaariq Al-Suweydaani)
Maysuun, sida hadalkeeda ka muuqdaa waa inan qurbaha ku nool, gaar ahaan waddamada Galbeedka. Qoraalkaan oo ah mid aad loo akhristay, aadna loogu faafiyay baraha bulshada, waxaa walaalo dhowr ah iga codsadeen inaan af Soomaali usoo tarjumo. Maysuun, waxay ka cabanaysaa kooxaha dadka Muslimiinta gaaleysiiya oo soo bandhigay diin ka duwan tii nebi Muxammad NNKH ee naxariista iyo dhimrinta bud-dhigga u aheyd. Akhriste, inta aadan qoraalka akhriyin waxaad fahantaa in gabadhu Muslimad tahay, hadalladeeduna ey falsafadeysan yihiin, una baahan tahay in akhristuhu uu fahmo biya-dhaca nuxurka dhigaalka Maysuun. Waxay weeraraysaa waa qaarka dadka gaaleysiiya, kuwaas oo dad badan oo Muslimiin ah ka saaray diinta. Sidaas aawadeed, waxaad dhigaalka Maysuun ku arki doontaa iyadoo ka barii noqonaysa waxa kooxahaan wax gaaleysiiya ey sameenayaan oo Rabbi u tiirinayaan. Maysuun waxay ku doodaysaa in kooxaha sidaan sameeya eysan ka tarjumeyn Rabbiga naxariista badan iyo diintiisa. Sidoo kale, waxay Maysuun ka hadlaysaa dhaqamo aan wanaagsaneyn oo ey Makka ku aragtay.
Maysuun waxay hadalkeeda ku bilowday:
“Ma waxaad rumeysan tihiin inaan idinka aamusi doono? Maya! Idinkama aamusayo, magaca Eebe ayaan ku dhaartee. Diintayda uguma dheganaan sanado badan oo aan Galbeedka ku noolaa, si ey iiga xuyuubiyaan qaar Muslinnimo sheeganaya”.
Maysuun, mar ey ka hadleysay sida kooxahaani ey diinta u dhallan rogeen waxay tiri:
“Eebe ayaan ku dhaartay ee! Waxaan ku laabanay xilligii Jaahiliyadda (casrigii Islaamka ka hor, oo dadku ey ku noolaayeen Mugdiga). Dadkii Muslimiinta waxaad ku cadaabteen aflagaaddo si aad diinta uga saartaan. Aniguna Eebaan ku dhaartee diintayda ka biximayo xataa haddii ey ‘Takfiiriyiintu’ ey dhibsadaan. Diintaan aad sheeganaysaan inaad difaacaysaan ma’aha diintayda, taasna ayaa sax ah, anigu diintaydu waa ISLAAM, diintii naxariista, idinkana diintiinu waa diinta gaaleysiinta iyo cadaawadda”.
Mar ey ka hadleysay sida xujjayda Makka loola dhaqmo waxay tiri:
“Makka aadimayo si aan u arko qaar sheeganaya iney diinta matalaan oo dumarka cagaha ka garraacaya, una horaya sida ariga loo horo. Anigu rati ma’ihi! Kaas oo gacanta ugu jira geeljire! Anigu waxaan aha qof banii’aadam ah oo Makka u timid si ey Rabbigeeda u caabuddo”.
“Makka aadimayo, si aan u arko daba-dhifle Israa’iil u shaqeeya oo ku sugan meel dhowr tillaabood u jirta xaramka Ilaahey”.
“Makka aadimayo, si aan u arko kumanaan sabool iyo masaakiin isugu jirta iyagoo Alle hortaagan, xiranna dharkooda dulufka ah, si uu imaamka ugu qasbo iney u duceeyaan boqorada iyo salaadiinta aanba salaadba tukan”.
“Makka aadimayo, si qalbigaygu uu ugu ooyo waxa magaaladaan daahirka ah aad ku sameyseen. Xaramka waxaan u tagay anigoo Eebe raadinaya, agtiinana kama helin, balse haa, waxaan ka helay qalbigayga. Haddaan Eebe ka raadin lahaa Makka, ama madhabkiinaan kakan, mar horaan diinta ka bixi lahaa. Eebaa mahad iskaleh igu hanuuniyay inaan qalbigayga ka raadiyo”.
Maysuun oo hadalkeeda sii wadataa waxay tiri:
“Islaamku hadduusan dhammaanteen nagu filneyn (taasna ey tahay sababta aad dadka u gaaleysiinaysaan) idinkaa fududee iska baxa, anigu halkaan ayaan Eebahay ku weheshanayaa…anigoo Muslimad ah, diintaydana weligey ka tagi mayo—xataa haddaad hub igula dagaalantaan. Waxaad disheen Xallaaj (wadaad suufi ahaa oo noolaa qarniyadii dhexe), waxaad disheen ruuxaaniyaddii Makka, waxaad disheen jeceylka dadku qalbiyadooda Eebe ugu hayeen, waxaad suura-xumeyseen diintii Alle—wajiyadiina ha xumaadaanee”.
Maysuun waxay dhigaalkeeda kusoo gunaanadday:
“Qofkii Muxammad NNKH caabudayay Muxammad waa dhintay, qofkii Alle caabudayayna Alle waa noolyahay mana dhinto. Alle waa kaligii, balse gaaleysiiyaha Rabbigiisa waa shiikhiisa, gaaleysiiyaha Rabbigiisa waa seeftiisa, anigana Ilaaheygu meel ma deganna jidhna ma’aha”.
“Haddii aad dhagaxa gaaleysiinta laabta iga saartaan, ma oranayo waxaan ka aheyn: Eebe waa kaligii, Eebe waa kaligii (sidii Bilaalba uu yiri), Eebow kaama helin beled dhexdiis, ama jidh, waxaan kaa helay qalbigayga oo qudha, cid aan adiga aheyn uma sujuudo. Eebe waa kaligii, Eebe waa kaligii, gaaleysiiyaha Rabbigiisu waa dilaa, gaaleysiiyaha rabbigiisu waa kaligii taliye..aniga ilaahayga qalbigayguu ku jiraa, cid dili kartaana majirto”.
FG: Dhigaalka waxaan kasoo tarjumay af Carabi, waxaana isku dayay inaan nuxurka tarjumaadda ilaaliyo, anigoo ka fogaanaya inaan xaraf ahaan u turjumo. Yeelkadeed, marnaba lama mid ahaan karo xagga fahanka dhigaalka asalka ahaa.